Ihe ọhụrụ ASUS Zenwatch 3 dị ọsọ ọsọ, gbaa gburugburu na ịdị gịrịgịrị | Akụkọ akụrụngwa
N'agbanyeghị oke ihe ịga nke ọma ọ na-enwe n'ahịa mba ụwa, ụlọ ọrụ ASUS na-amụta ihe site na mmejọ ya ma mepụta mbipụta nke atọ nke Zenwatch smartwatch. Asus Zenwatch 3 na-enye anyị ihuenyo 1,39-inch, na mkpebi nke 400 × 400 na 287 pikselụ kwa inch. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Huawei Watch na nke dị ntakịrị karịa ọgbọ nke abụọ Motorola 360. Okwu nke ihe omuma ohuru a bu nke ígwè ma di na agba di iche: oji, ọla ọcha na ola edo. Modelsdị atọ a na-enye anyị okpueze ọla edo na mpụga nke iko.
Asus ZenWatch 3 bụ 9,95 millimeters buru ibu, dị ntakịrị karịa usoro Huawei Watch na Motorola 360 nke abụọ. N'ime anyị na-ahụ a Snapdragon Yiri 2100 processor na 512 MB Ram na 4 GB nke nchekwa dị n'ime. Banyere batrị, isi ọrụ nke ngwaọrụ ndị a, anyị na-ahụ 342 mAh na dịka onye nrụpụta nwere ike isi nye anyị nnwere onwe zuru ezu iji gaa ụbọchị abụọ na-agaghị agafe chaja. Ọzọkwa ma ọ bụrụ na anyị na-agba ọsọ na batrị n'oge ọ bụla, ọ mejuputa usoro ngwa ngwa ngwa ngwa nke na-enye anyị ohere ịkwụ ụgwọ 60% nke ngwaọrụ naanị na 15 nkeji. Nchaji na-eme site na njikọ ndọta.
Mana ọ bụrụ na oge a dị mkpụmkpụ maka ụfọdụ ndị ọrụ, emeputa ga-ere ire a emeju nke ga-enye anyị ihe mmezi 40% batrị. Na akụrụngwa ngwanrọ, onye nrụpụta na-enye anyị ohere ịhazi ngwaọrụ ahụ ruo ogo 50 ma ọ bụ ihu elekere dị iche iche. Na mgbakwunye, e tinyekwara wijetị na-enye anyị ka anyị hazie ozi enyere na oge nke ngwaọrụ ahụ, n'ụdị ihe anyị nwere ike ịchọta na Apple Watch na nlele ndị ama ama.
Banyere ọnụahịa, enweghị ugbu a nnweta ụbọchị. Maka ọnụahịa, dị ka onye na-emepụta ya si kwuo, ọ ga-aga ahịa maka ihe dị ka euro 229, karịa ọnụ ahịa asọmpi na nke ahụ ga-enye ọtụtụ agha na ahịa smartwatches na ọnwa ndị na-abịanụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ihe ọhụrụ ASUS Zenwatch 3 dị ọsọ ọsọ, gbaa gburugburu ma peepe
O yiri ka ekwenyela na iPhone 7 ga-abịa na àmụmà ka ọ bụrụ ihe nkwụnye ọkụ, na mgbakwunye na EarPods nwere njikọ ọkụ ọkụ